यी ५ कुरा जसले याै’न जीवन रसिलो बनाउछ - PARIJATMEDIA
हरेक वयस्क मानिसमा यौ’नका बारेमा चासो हुनु र यसबारे चाहना रहनु स्वभाविक हो । हरेक मानिसले आफ्नो उमेरसंगै यौ’न जीवनलाई सुन्दर बनाउन प्रयाश गर्नुपर्छ । अन्यथा यौ’न जिवन जवनी मै ध्व’स्त हुनसक्छ तसर्थ समयमै यी कुरा ख्याल राख्नुपर्छ ।
यी ५ कुरामा ख्याल राख्न सके पक्कै याै’नजीवन रसिलो हुन्छ ।
धूम्रपान र म द्यपानले मानिसको स्वास्थ्यमा निकै असर पार्दछ । यौ न जीवनमा कुलतले नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । धूम्रपानले यौ न जीवनमा असर पुर्‍याउँनुका साथै रक्तसञ्चारमा कमी ल्याई उत्ते’जना घटाउँछ । साथै म द्यपानले तत्काल याै’नमा रूचि जगाएपनि याै’न क्षमतामा भने कमि ल्याउदछ ।
तनावले हृदयको गति बढाउँछ, जसका कारण रक्तचाप बढ्ने गर्दछ । यसले यौ न जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । तसर्थ यौ न जीवन सुन्दर बनाउन तनावबाट बच्नु र पार्टनरसँग खुलेर मनको कुरा शेयर गर्नु पर्दछ ।
– पर्याप्त निन्द्रा
यौ न जीवनलाई अनिद्राले ठुलो असर गर्छ । आठ घण्टा निदाउनेहरुमा यौ न इच्छा जाग्ने र लामो समयसम्म यौ न क्षमता रहिरहन सक्छ ।
– नयाँ आ-सन
अधिकाशं जोडि यौ न कार्यका लागी प्रायः एकै किसिमको आ सन अपनाउने गर्दछन् । तर लामो समय एकै किसिमको आ सनमा यौ नकार्य गर्नु बोरिङ र नीरस हुन्छ । त्यसैले यौ नलाई उत्साहित बनाउनका नयाँ आसनको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ ।
– अ श्लील चलचित्र कम
आजकल प्रायजसो मानिमा अ श्लील भिडियो वा तस्वीर हेर्ने बानी हुन्छ । तर अ श्लील भिडियो हेर्नु यौ न जीवनका लागी घा’तक साबित हुन्छ । यस्तो लत लागेमा अवास्तविक आकांक्षाले यौ नतर्फ कामो’त्तेजना घट्दै जान्छ ।
Prevजस्ताेसुकै बिजी भएपनि एकपटक अवश्य पढाै !! नपढे तपाईलाई पछुताे हुनेछ !!
nextदक्षिणकालीमाईले हामी सबैको रक्षा गरुन, हेर्नुहोस आज’को राशीफल!